Olee otu data onboarding na enyere aka ire ahia di iche iche | Martech Zone
Ndị ahịa gị na-eleta gị - site na ngwaọrụ mkpanaka ha, site na mbadamba ha, site na mbadamba ọrụ ha, site na desktọọpụ ụlọ ha. Ha jikọtara gị site na mgbasa ozi mmekọrịta, email, na mkpanaka mkpanaka gị, site na ebe nrụọrụ weebụ gị na ebe azụmahịa gị.
Nsogbu bụ na, belụsọ na ịchọrọ nbanye nke etiti ọ bụla, data gị na nsochi gị na-agbaji n’ebe niile nchịkọta na nyiwe ahia. N'elu ikpo okwu ọ bụla, ị na-elele echiche ezughị ezu nke data na omume metụtara onye ahịa ma ọ bụ atụmanya.
Gịnị bụ Data On-abanye?
Data On-Boarding na-eme ka data ndị ahịa gị site na isi mmalite data dị iche iche yana ọbụlagodi na ụlọ ahịa site na ịdenye akara ngosi dijitalụ n'ofe data. Ngwa mkpanaka, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịmata isi ihe metụtara ngwaike. Ulo oru na ndi mmadu nwere ike ichoputa ma choputa ya na ebe IP di. Iguzosi ike n'ihe nke adreesị, adreesị ozi-e na logins nwere ike inye aka n'ịchọpụta.
Data onboarding na-eme ka ire ahịa dị iche iche dị mfe, na-enye gị ike ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa ka mma ma nyefee nsonaazụ nwere atụ. Via LiveRamp
Ndị na-abanye na ya nwere ike dakọtara ndị ahịa n'ofe data data niile wee bido ịchọta data na-enweghị aha ruo mgbe onye ọbịa gosipụtara na amata ha ma jikọọ profaịlụ. Ndị ọrụ dị ka LiveRamp na-anakọta data n'ofe a plethora nke ndị ọzọ na mgbasa ozi ahịa iji bulie profaịlụ ma mesie ha ike.
Nke a na-enye usoro dị oke egwu iji ghọta etu ndị ahịa gị si akpa agwa, ụdị azụmaahịa enwere ike ịdabere na ọkachasị mgbe yana ọwa ị ga - eji zụọ ha.
Tags: data on-abanyedata site na ekwentịihe ntiotutu ọwaotutu ahia ahia
Depghara Experidabere na Ahụmahụ Nke Onwe Gị Na-ewute Gị